Ester 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Bere a ɔsram a ɛto so dumien a ɛne Adar+ no da a ɛto so dumiɛnsa dui sɛ ɔhene asɛm ne ne mmara bɛyɛ adwuma,+ da a na Yudafo atamfo ani da so sɛ wobedi wɔn so no, nneɛma danee ma Yudafo no mmom dii wɔn atamfo so.+ 2 Yudafo no boaboaa wɔn ho ano+ wɔ wɔn nkurow mu wɔ aman a ɛhyɛ Ɔhene Ahasweros+ ase nyinaa mu sɛ wɔne wɔn a wɔpɛ wɔn bɔne+ no bedi, nanso obiara antumi annyina wɔn anim, efisɛ na wɔn ho hu+ atɔ nnipa nyinaa so. 3 Na amantam no mu mmapɔmma+ ne asoafo+ ne amradofo ne ɔhene adwumayɛfo+ nyinaa boaa Yudafo no, efisɛ na Mordekai ho hu+ atɔ wɔn so. 4 Na Mordekai yɛɛ onipa kɛse+ wɔ ahemfie hɔ, na ne tumi kɔɔ so yɛɛ kɛse+ maa ne din+ trɛwee amantam no nyinaa mu. 5 Na Yudafo no de nkrante+ kunkum wɔn atamfo sɛee wɔn nyinaa, na wɔyɛɛ wɔn atamfo no sɛnea wɔpɛ.+ 6 Susan+ abankɛse no mu hɔ nso Yudafo no kunkum nnipa ahanum. 7 Na Parsandata ne Dalfon ne Aspata 8 ne Porata ne Adalia ne Aridata 9 ne Parmasta ne Arisai ne Aridai ne Waisata 10 a wɔyɛ Hamedata ba Haman+ a na ɔmpɛ Yudafo asɛm+ no mma+ du no nso, wokunkum wɔn, nanso wɔamfa wɔn nsa anka agyapade+ biara. 11 Saa da no nnipa dodow a wokunkum wɔn Susan abankɛse mu no ho asɛm beduu ɔhene anim. 12 Afei ɔhene ka kyerɛɛ Ɔhemmaa+ Ester sɛ: “Yudafo akunkum nnipa ahanum wɔ Susan abankɛse+ mu, na wɔakum Haman mma du no nso. Na dɛn na wɔayɛ+ wɔ ɔhene nsase+ a aka no nso so? W’abisade ne dɛn, na menyɛ mma wo?+ Dɛn bio na wuhia,+ na menyɛ mma wo?” 13 Ɛnna Ester kae sɛ: “Sɛ ɔhene bɛpene so a,+ ma Yudafo a wɔwɔ Susan no kwan na ɔkyena nso wɔnyɛ nea mmara ma wɔyɛe nnɛ no,+ na wɔmfa Haman mma du no nso nsensɛn dua so.”+ 14 Ɔhene hyɛe sɛ wɔnyɛ saa.+ Enti ɔhyɛɛ mmara wɔ Susan, na wɔsɛn Haman mma du no. 15 Afei Yudafo a wɔwɔ Susan no boaboaa wɔn ho ano ɔsram Adar da a ɛto so dunan no,+ na wokunkum nnipa ahasa wɔ Susan, nanso wɔamfa wɔn nsa anka agyapade biara.+ 16 Na Yudafo a wɔwɔ ɔhene nsase+ a aka so no boaboaa wɔn ho ano peree wɔn kra,+ na wɔne wɔn atamfo dii asi+ kunkum wɔn mu mpem aduɔson anum, nanso wɔamfa wɔn nsa anka agyapade biara. 17 Wɔyɛɛ eyi ɔsram Adar da a ɛto so dumiɛnsa no. Na da a ɛto so dunan no wɔhomee, na ɛbɛyɛɛ apontow+ ne anigye da.+ 18 Yudafo a wɔwɔ Susan no boaboaa wɔn ho ano da a ɛto so dumiɛnsa+ ne da a ɛto so dunan no, na da a ɛto so dunum no, wɔhomee na ɛyɛɛ apontow ne anigye da.+ 19 Enti Yudafo a wɔtete nkurow nketewa mu no yɛɛ ɔsram Adar+ da a ɛto so dunan no anigye+ ne apontow ne ahosɛpɛw da,+ na wɔkyekyɛɛ nneɛma.+ 20 Afei Mordekai+ kyerɛw eyinom ho nsɛm na ɔde krataa kɔmaa Yudafo a wɔwɔ Ɔhene Ahasweros ahemman+ no nyinaa mu, wɔn a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri, 21 hyɛɛ+ wɔn sɛ wɔnkae ɔsram Adar da a ɛto so dunan ne da a ɛto so dunum no na wɔnhyɛ ho fã afe biara 22 sɛ nna a Yudafo home fii wɔn atamfo+ nsam ne ɔsram a awerɛhow+ danee anigye na osu danee ahosɛpɛw no, na wɔmma ɛnyɛ apontow ne anigye ne adekyɛ+ nna, na wɔnyɛ ahiafo ayɛ.+ 23 Enti Yudafo no gyee nea wɔafi ase reyɛ ne nea Mordekai kyerɛw brɛɛ wɔn no toom, 24 efisɛ na Agagni+ Hamedata+ ba Haman+ a ɔmpɛ Yudafo asɛm+ no abɔ pɔw sɛ ɔbɛsɛe wɔn,+ na ɔbɔɔ Pur,+ anaa ntonto,+ sɛ wɔbɛtan wɔn ani asɛe wɔn. 25 Nanso Ester baa ɔhene anim na ɔhene ma wɔkyerɛwee+ sɛ: “Ma pɔw bɔne+ a wabɔ wɔ Yudafo no ho no nnan mmɔ n’ankasa ti so.”+ Afei wɔsɛn ɔne ne mma wɔ dua so.+ 26 Enti na wɔfrɛ saa nna yi Purim, a efi edin Pur+ mu no. Na sɛnea krataa+ yi mu nsɛm kyerɛ ne nea wɔn ankasa ahu ne nea aba wɔn so nyinaa nti, 27 Yudafo no gye toom sɛ wɔne wɔn mma ne wɔn a wɔde wɔn ho bɛbɔ wɔn+ nyinaa bekura amanne yi mu, na wɔremma entwam. Afe biara, edu so a, wɔbɛkae nna abien yi ahyɛ ho fã sɛnea ɛho nsɛm a wɔakyerɛw no te. 28 Na ɛsɛ sɛ awo ntoatoaso biara, abusua biara, ɔmantam biara, ne kurow biara kae saa nna yi, na ɛnsɛ sɛ Yudafo ma Purim nna yi pa wɔn ti so, na saa ara na ɛnsɛ sɛ wɔn mma gyae di.+ 29 Na Abihail+ ba Ɔhemmaa Ester ne Yudani Mordekai de tumi a wɔwɔ nyinaa kyerɛwee de hyɛɛ krataa a ɛto so abien a ɛfa Purim ho yi mu den. 30 Afei ɔde krataa kɔmaa Yudafo a wɔwɔ amantam+ ɔha aduonu ason a Ahasweros+ di so no mu nyinaa, asomdwoe ne nokware mu,+ 31 na wɔde sii so dua sɛ bere a wɔahyɛ mu no, Yudafo ne wɔn mma+ nyinaa nhyɛ Purim nna no mu den, sɛnea Yudani Mordekai ne Ɔhemmaa Ester hyɛɛ wɔn+ na wɔn ankasa sii gyinae sɛ wɔbɛhyɛ mmuadadi+ ne sufrɛ+ no ho fã no. 32 Nea Ester kae no hyɛɛ Purim+ nsɛm no mu den, na wɔkyerɛw ne nyinaa wɔ nhoma mu.